रेखा थापा (अभिनेत्री)चाहे त्यो फिल्म क्षेत्र होस् वा अन्य कुनै पनि उद्योग, हिंसाको विरुद्ध सदैव उभिएको पात्र हुँ म । मलाई हिंसा पट्क्कै मन पर्दैन् । चाहे त्यो मेरो घर भित्रबाट गरिएको हिंसा किन नहोस् । ममीले, बुबाले, दाईले, दिदिले मलाई कुनै पनि प्रकारको शासकिय प्रविद्धिबाट आदेश दिएको कुरा मलाई कहिले पनि स्वीकार्य हुने थिएन । र म स्वीकार गर्दिन पनि ।
मेरो विचार फरक छ । मरो विचार चलचित्र मार्फतदेखि नै के छ भने लड् । लड्दा खेरी दुई तीनवटा करङ् भाचिएछ त्यो पुरुषको भने पनि केही छैन । कुट तिमीहरू पनि । कसैले सिकायो रु अनि रुनु पर्ने रु एउटा महिला कहाँ कहाँ बाच्नु पर्छ रु उसको जीवन कहाँ कहाँ हुन्छ रु घर, पसल, बजार स्कुल अनि यो समाज । जहाँ जहाँ उ बाच्नु पर्छ त्यहाँ त्यहाँ लडाई गर्नैपर्छ । र लडाई गरेको अनुभव हुनै पर्छ त्यो महिलाको । तर हामीले सिकायौं रु नबोल, संस्कारी बन, सहेर बस र नैतिकताको पाठ पढायौं । त्यो नैतिकताको पाठ एका तिर पढाउछौं र अर्को तिर हिंसारहित समाजको परिकल्पना वा कल्पना गछौं । यो सम्भव छ रु
हामीले महिलालाई आफ्नो छोरीलाई संर्घष गर्न सिकायौं रु कहिले पनि सिकाएकोे मलाई थाहा छैन । तपाईहरू कल्पना गर्नुहोस् त तपाईहरू यो सहरमा, यो देशमा कयौं झगडा लडाईहरू भएको सुन्नु भएको छ । मलै लडाई लड्नु पर्छ, कुट्नु पर्छ भनेको होइन । त्यो लडाईमा कुनै पनि महिलाले पुरुषलाई कुटि भन्ने समाचार सुन्नु भएको छ रु किन सुनिदैन् भने यहाँ छोरी मान्छेलाई नैतिकताकोे पाठ पठाइन्छ । यदि छोरी मान्छे लडि भने उ अनुशासीत हुँदिन । उ अमर्यादित हुन्छे । अनि यसरी हामी हिंसारहित समाजको कल्पना गर्न सक्छौं ।
यदि हामी स्वतन्त्र जीवन बाच्न चहान्छौं, आफ्नो अस्तित्वको लडाई लड्न चहान्छौं भने बढी भई, संस्कार नै छैन रहेछ भन्ने प्रकारको टिका टिप्पणी गछौं । ए छोरीले मात्रै इजजत धानिदिनु पर्ने ? छोरीले मात्रै संस्कार सिक्नुपर्ने ? अनि छोरीले सबै कुरा धानिदिपछि मात्रै यो समाज राम्रो हुने ?
एकातिर दमित भएर बस्ने तालिम दिन्छौं । अर्को तिर लडाकु छोरीहरू खोजिन्छ के यो सम्भव छ रु यो प्रश्न मेरो समाजलाई हो । तपाईहरूलाई पनि हो । मलाई लाग्छ छोरीलाई कलम मात्र होइन हातमा तरबार पनि दिनुपर्छ । यदि छोरीलाई हातमा कलम र अर्को हातमा तरवार दिने हो भने यो दुनिया कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ छोरीहरूलाई । तर यहाँ स्वस्थानीको नैतिकता पाठ पढाइन्छ अनि एकातिर भनिन्छ हिंसा नसह । अर्को तिर भन्छौं बढी किन बोल्या रु छोरी मान्छे भएर बढी बोल्ने हो । यो दोहोरो चरित्रले त छोरीको मुक्ति कहिले नि हुँदैन । महिला मुक्ति कहिले पनि हुँदैन । मलाई लाग्दैन त्यसै कारण तपाइहरू ढुक्क भएर आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि लड्नुहोस् । दुई तीन बटा दाँत फुस्किएछ भने पनि केही छैन । फुस्काइदिनुहोस् । कहिले सम्म डराएर बस्ने । कहिलेसम्म बुबाको संरक्षणमा, प्रेमीको संरक्षणमा, श्रीमानको संरक्षणमा कहिले सम्म अरुले मलाई रक्षा गर्छ भनेर बाची रहने ? निडर भएर बाँच्नुहोस् ।
एउटा रोल्पाको ओनसरी घर्ती मगर हुनुहुन्छ । जो सभामुख हुनुभयो । हिजो त्यो जनयुद्धले जन्माएको आक्रमक योद्धा त हो नी । रोल्पामा गएर किस्तीमा त्यो पद त उहाँलाई दिइएको होइन नि । किन दिइयो त भन्दा उहाँ लडाकु हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लड्न सिक्नु भो । उहाँले यो व्यस्थासंग, यो समाजसंग अनि परिवारसंग लड्नु भयने । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ । हामी कतिलाई सहज लाग्ला । मान्छेले केके भन्छन् । त्यसलाई बिर्सौं । यदि उहाँको राजनीतिक चरित्र, आक्रमक बोल, समाज, परिवार र आफ्नो यो बसेको दुनियासँग लडाई गर्न नसकेको भए आज राष्ट्रपति बन्न सक्नु हुन्थयो रु कसैले लगेर पदमा राखिदिँदैनन् । त्यो ज्ञान हुन पनि आवश्यक छ ।
मलाई धेरैले टिकाटिप्पणी पनि गर्नुहुन्छ । फिल्म उद्योगमा मा आउँदा यो कस्तो खालको केटी हो, केटा जस्तो पनि भन्थे । ल म बलियो हुँदा केटा जस्तो ?भनेको हामी परिचय कहिले परिवर्तन गर्ने त ? हामी सबै मान्छे हौं । हामी मान्छे भएर बाच्नु पर्छ । समाजमा तपाईको छोरीलाई लड्न सिकाउनु भएको छ । लड, परेको म व्यहोर छु भनेर एक पटक हेरौं न त । अब दुनिया परिवर्तन हुने बेला आएको छ । तपाईहरू आफ्नो आफ्नो घरबाट जाग्नु होस् । घरबाट त्यो लडाई शुर हुनुपर्छ । मनको कमजोर सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ । छोरीको सत्ता पनि त्यतीकै कमजोर छ जती अहिले हाम्रो देशको छ । जबसम्म यो सत्ता भत्काएर नयाँ सत्ता बन्दैनन् छोरी मान्छेहरूको मन भित्रको सत्ता तबसम्म हामी निरहीय नै बन्नु पर्ने हुन्छ ।-द नेपाल टपबाट